Ndepụta zuru ezu nke SQL Server MDF Njikwa Njehie na Nsogbu
Home ngwaahịa DataNumen SQL Recovery Ndepụta nke Njehie
SQL Server Njehie na Nsogbu
Ndepụta nke Njehie na Nsogbu SQL Server MDF faịlụ nchekwa data
Mgbe ị na-eji Microsoft SQL Server iji gbakwunye ma ọ bụ nweta faịlụ nchekwa MDF rụrụ arụ, ị ga-ahụ ozi njehie dị iche iche, nke nwere ike ịbụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya nye gị. Yabụ, lee, anyị ga-anwa ịdepụta njehie niile enwere ike, wee nwee ike gụpụta ha kwa ugboro. Maka njehie ọ bụla, anyị ga-akọwa mgbaàmà ya, kọwaa ihe kpatara ya ma nye faịlụ nlele yana faịlụ edozi nke anyị DataNumen SQL Recovery, ka i nwee ike ịghọta ha nke ọma. N’okpuru, anyị ga-eji ‘xxx.MDF’ gosipụta nrụrụ aka gị SQL Server MDF aha njirimara faịlụ.
Dabere na SQL Server ma ọ bụ CHECKDB njehie ozi, e nwere atọ iche iche nke njehie nke ga-eme ka ọdịda:
Njehie njehie: Anyị maara data na faịlụ MDF & NDF na-ekenye dị ka peeji nke. Ma enwere ụfọdụ peeji pụrụ iche eji arụ ọrụ maka oke, dị ka ndị a:
Typedị Peeji Description
GAM Peeji Chekwaa oke oke oke uwa (GAM) Ama.
Peeji SGAM Chekwaa ihe omuma oke oke uwa (SGAM).
IAM Peeji Storelọ ahịa na-ekenye map (IAM) Ama.
PFS Peeji Chekwaa ozi oke PFS.
Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime peeji ndị ae nwere n'elu nwere njehie, ma ọ bụ data nke ibe ndị a jikọtara na-ekwekọghị na ozi oke, mgbe ahụ SQL Server ma ọ bụ CHECKDB ga-akọ oke njehie.
Agbanwe njehie: n'ihi na peeji nke na-eji iji chekwaa data, gụnyere ibe data na ibe peeji, ọ bụrụ SQL Server ma ọ bụ CHECKDB chọta ihe ọ bụla na-ekwekọghị ekwekọ n'etiti ọdịnaya ọdịnaya na checksum, mgbe ahụ ha ga-akọ agbanwe agbanwe.
Njehie ndị ọzọ niile: Enwere ike ịnwe njehie ndị ọzọ adabaghị na ngalaba abụọ dị n'elu.
xxxx.mdf abụghị isi faịlụ nchekwa data. (Microsoft SQL Server, Njehie: 5171)
Nkụnye isi maka faịlụ 'xxxx.mdf' abụghị ezigbo nkụnye eji isi mee faịlụ. Ngwongwo FILE SIZE ezighi ezi. （Microsoft SQL Server, Njehie: 5172）
SQL Server achoputara ezi uche dabere na njehie I / O: checksum na ezighi ezi
SQL Server achoputara ezi uche dabara adaba na njehie I / O: peji
Hichapụ ụfọdụ ndekọ ma ọ bụ ụfọdụ tebụl na nchekwa data n'amaghị ama.
SQL Server nwere akụrụngwa a na-akpọ DBCC, nke nwere Nyochaa na Nyochaa nhọrọ ndị nwere ike inyere aka rụkwaa nchekwa data MDF rụrụ arụ. Agbanyeghị, maka nnukwu faịlụ nchekwa data MDB mebiri emebi, DBCC Nyochaa na Nyochaa ga-ada.
Agbanwe agbanwe njehie kọrọ site CHECKDB:
Ahịrị na sys.xxx enweghị usoro dabara na sys.xxx.
Isiokwu njehie: Obere NJ ##, index ID ## ga-wughachi.
Enweghi ike imeghari usoro ihe ntanye usoro ihe a.
Ihe NJ # #, ndenye ID ##, nkebi ID ##, igbunye unit NJ ## (pịnye Unknown), peeji NJ (##: 560) nwere ihe na-ezighị ezi na peeji nke NJ na peeji nke nkụnye eji isi mee.
Njehie oke e dere na CHECKDB:
Akwụkwọ Index Allocation Map (IAM) na-egosi Pointer nke IAM Peeji ọzọ
Ogologo (##: ##) na nchekwa data ID ## ka akara akara na GAM, mana onweghi SGAM ma ọ bụ IAM ekenyela ya.
Njehie ndị ọzọ niile nke CHECKDB kwuru:
Failed: (- #######) Imezu ajụjụ a “DBCC CHECKDB (xxxx) NA NO_INFOMSGS” dara na mmejọ ndị a: “xxxx”.
Achọpụtara m / O njehie (ID peeji ọjọọ) n'oge a na-agụ ya na mbido 0x ###### na faịlụ 'xxxx.mdf'.
Sistem ike rụọ ọrụ nke zuru ezu nke data iji wugharịa log
Ọnwụ data mgbe ị na-arụ ọrụ na CHECKDB
Faịlụ gosipụtara na sistemụ arụmọrụ ejirila ya.
Mgbe ị na-emegharị ọrụ abanye na nchekwa data 'xxxx', njehie mere na ndekọ ndekọ ndekọ.